News – University Of Computer Studies , Monywa
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၂၀ ခုနှစ်အောင်)
Posted in Announcement, News, Our Activities, Uncategorized
Scientific Journal of Innovative Research 2020 Volume-02, Issue-01 (SJIR 2020) CALL FOR PAPERS Paper Template for SJIR,2020 Vol-2Download SJIR,Vol-2,Issue-1 call for paper-Download update SJIR Editorial BoardDownload
e_Government အထောက်အကူပြု သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၄.၁.၂၀၂၀ (သောကြာနေ့) နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ဇေယျာသီရိခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
B.C.Sc. (Bachelor of Computer Science) နှင့် B.C.Tech. (Bachelor of Computer Technology)ဘွဲ့အတွက် ၅ နှစ်သင်တန်း၏ Credit Unit စုစုပေါင်းဖော်ပြချက် First Year Guide Book Second Year Guide Book Third Year to Fifth Year Guide Book
NLP R&D Summer School 2019, UCS (Monywa), Myanmar
Posted on November 7, 2019 November 29, 2019 by admin
Dr. Ye Kyaw Thu isaVisiting Professor of Language & Semantic Technology Research Team (LST), Artificial Intelligence Research Unit (AINRU), National Electronic & Computer Technology Center (NECTEC), Thailand. Homepage: https://sites.google.com/site/yekyawthunlp/ GitHub: https://github.com/ye-kyaw-thu
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင်)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ၀င်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်အောင်) အမြင့်ဆုံးအမှတ်- ၄၅၁ အနိမ့်ဆုံးအမှတ်- ၃၇၁
Scientific Journal of Innovation Research 2019 Volume-01 Call For Paper အတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ချက်
Notification of Full Paper Acceptance အား 24 ရက် July, 2019 သို့ပြင်ဆင် သတ်မှတ်လိုက်သည်။Registration deadline အား 8 ရက် August, 2019 သို့ပြင်ဆင် သတ်မှတ်လိုက်သည်။First Author အတွက် Registration Fees -15000 ကျပ် နှင့် Delivery Fees-3000 ကျပ် ပေးသွင်းရပါမည်။Second Author နှင့် Third Author အတွက် Certificate ရယူလိုပါက တစ်ဦးလျှင် 1000 ကျပ် ပေးသွင်းရပါမည်။ Bank ...
Posted on April 29, 2019 June 14, 2019 by admin
Scientific Journal of Innovative Research 2019 Volume-01Paper တင္ရန္ deadline အား (28-6-2019) သို႔ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။Paper Template for SJIR,2019 Vol-1Download
ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္B.C.Sc. /B.C.Tech. ဘြဲ႕သင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည့္အစီအစဥ္
Posted on January 14, 2019 April 26, 2019 by admin
၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကို ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မုံ႐ြာ)တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္လိုသူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။